Usuku Lomama eRussia | Ukuhamba kwe-Absolut
Isabella | 16/04/2021 11:32 | Kubuyekezwe ku- 16/04/2021 12:34 | Rusia
Usuku Lomama yiholide elikhetheke kakhulu eligujwa emhlabeni wonke ukukhumbula bonke omama nokubonga uthando nokuvikelwa abanikeza izingane zabo kusukela bezalwa.
Njengoba kungumgubho wamazwe omhlaba, ezweni ngalinye kugujwa ngezinsuku ezehlukene, yize okujwayeleke kakhulu kuba yiSonto lesibili ngoMeyi. Kodwa-ke, uSuku Lomama eRussia lwenzeka ngolunye usuku. Ungathanda ukwazi ukuthi ligujwa kanjani kuleli?
1 Lunjani uSuku Lomama eRussia?
2 Uyini umsuka woSuku Lomama?
3 Lugujwa nini uSuku Lomama kwamanye amazwe?
Lunjani uSuku Lomama eRussia?
Usuku Lomama eRussia lwaqala ukugujwa ngo-1998, lapho lwamukelwa ngumthetho ngaphansi kohulumeni bakaBorís Yeltsin. Kusukela lapho, ibibanjwa ngeSonto lokugcina ngoNovemba minyaka yonke.
Njengoba lo kungumkhosi omusha eRussia, awekho amasiko asunguliwe futhi umndeni ngamunye uwugubha ngendlela yawo. Kodwa-ke, izingane zenza amakhadi ezipho nemisebenzi yezandla eyenziwe ngezandla ukubonga omama bazo ngothando lwabo nokuveza imizwa yabo.
Abanye abantu benza isidlo sakusihlwa somndeni esikhethekile lapho benikeza omama isixha esihle sezimbali zendabuko njengophawu lokubonga kwabo, okuhambisana nomyalezo wothando.
Kunoma ikuphi, inhloso yoSuku Lomama eRussia ukukhuthaza izindinganiso zomndeni kanye nencazelo ejulile yothando lomama ngezingane zabo futhi ngokufanayo.
Uyini umsuka woSuku Lomama?
Singathola umsuka woSuku Lomama eGrisi lasendulo eminyakeni engaphezu kwengu-3.000 XNUMX eyedlule lapho kwakugujwa imikhosi yokuhlonipha uRea, umama we-titanic wonkulunkulu obaluleke njengoZeus, iHayidese noPoseidon.
Indaba kaRea isitshela ukuthi wabulala umyeni wakhe uCronos ukuvikela impilo yendodana yakhe uZeus, ngoba wayedle izingane zakhe zangaphambili ukuze angaqedwa esihlalweni sobukhosi njengoba enza noyise u-Uranus.
Ukuvimbela uCronos ekudleni uZeus, uRea wenza isu futhi wafihla itshe ngamanabukeni ukuze umyeni wakhe alidle, ekholelwa ukuthi yindodana yakhe ngenkathi ekhula esiqhingini saseKrete. Lapho uZeus eba mdala, uRea wakwazi ukwenza uCrono aphuze umuthi owenza zonke izingane zakhe zahlanza.
Ngothando alubonisa izingane zakhe, amaGrikhi amhlonipha. Kamuva, lapho amaRoma ethatha onkulunkulu bamaGrikhi nawo amukela lo mgubho futhi phakathi noMashi kwanikelwa ngezinsuku ezintathu kunkulunkulukazi uHilaria ethempelini laseCibeles eRoma (elimele uMhlaba).
Kamuva, amaKrestu aguqule leli holide elinemvelaphi yobuqaba laba elihlukile ukuhlonipha iNcasakazi uMariya, umama kaKristu. Kwabangcwele bamaKhatholika ngoDisemba 8 kugujwa i-Immaculate Conception, usuku laba abathembekile abaluthatha ukukhumbula uSuku Lomama.
Kakade ngekhulu lama-1914, umongameli wase-United States uWoodrow Wilson wamemezela ngo-XNUMX iSonto lesibili lika-Meyi njengoSuku Lomama olusemthethweni, isenzo esasizwakala nakwamanye amazwe amaningi omhlaba. Kodwa-ke, amanye amazwe anesiko lamaKhatholika aqhubeka nokugcina leli holide ngoDisemba yize iSpain lalihlukanisela ukulihambisa ngeSonto lokuqala ngoMeyi.
Lugujwa nini uSuku Lomama kwamanye amazwe?
Leli lizwe ligubha uSuku Lomama ngeSonto lesibili ngoMeyi. Owokuqala ukukwenza ngendlela esazi ngayo ukuthi kwakungu-Anna Jarvis ngokuhlonipha umama wakhe ongasekho ngoMeyi 1908 eVirginia. Kamuva wenza umkhankaso wokusungula uSuku Lomama njengeholide likazwelonke e-United States ngakho-ke kwamenyezelwa ngo-1910 eWest Virginia. Ngemuva kwalokho ezinye izifundazwe zizolandela ngokushesha.
EFrance, uSuku Lomama yisiko lakamuva kakhulu, njengoba laqala ukugubha ngawo-XNUMX. Ngaphambi kwalokho, kwezinye izinsuku imizamo yabesifazane abathile ababelethe inqwaba yezingane ukusiza ukubuyisa inani elinciphile ezweni ngemuva kweMpi Enkulu yahlonishwa yaze yanikezwa nezindondo zokufaneleka.
Njengamanje kugujwa ngeSonto lokugcina ngoMeyi ngaphandle kokuthi kuqondane nePentekoste. Uma kunjalo, uSuku Lomama lwenzeka ngeSonto lokuqala ngoJuni. Noma ngabe usuku luni, into yendabuko ukuthi izingane zinikeze omama bazo ikhekhe elinjengembali.
Kuleli zwe lase-Asia, uSuku Lomama lungumgubho omusha uma kuqhathaniswa, kepha abantu abaningi baseChina bagubha iSonto lesibili ngoMeyi ngezipho nangokujabula okukhulu nomama babo.
Usuku Lomama lukhunjulwa ngomdlandla omkhulu futhi lusuku olubalulekile. Lo mgubho uqala ngosuku olwandulela lolu lapho kuyisiko ukuthi izingane zihlukanise omama bazo noma ogogo bazo, kungaba ngokwabo noma ngokuqasha izinsizakalo zabaculi abaqeqeshiwe.
Ngakusasa kwenziwa inkonzo yesonto ekhethekile futhi izingane zinikeza omama bazo izipho ezibenzele zona esikoleni.
Indlovukazi Umama waseThailand, Her Majness Sirikit, naye uthathwa njengomama wazo zonke izifundo zakhe zaseThai kanjalo uhulumeni wezwe ugubhe uSuku Lomama ngosuku lwakhe lokuzalwa (Agasti 12) kusukela ngo-1976. Kuyinto iholidi likazwelonke eligujwa ngesitayela ngeziqhumane namakhandlela amaningi.
Usuku Lomama eJapane lwathola ukuthandwa okukhulu ngemuva kweMpi Yezwe II futhi njengamanje lugujwa ngeSonto lesibili ngoMeyi.
Leli holide lihlala ngendlela ehloniphekile neyendabuko. Imvamisa izingane zidweba izithombe zomama bazo, zilungise izitsha ezibafundise zona ukuzipheka futhi ziphinde zibanikeze izimbali ezibomvana noma ezibomvu njengoba zifanekisela ubumsulwa nobumnandi.
Usuku Lomama e-UK lungenye yamaholide amadala kakhulu eYurophu. Ngekhulu le-XNUMX, iSonto lesine leLent labizwa ngokuthi iSunding Mothering ngeSonto lokuhlonipha iNcasakazi uMariya. futhi imindeni yathatha ithuba lokuhlangana, iya emiseni futhi ichithe usuku ndawonye.
Ngalolu suku olukhethekile, izingane zilungiselela omama bazo izipho ezahlukahlukene, kepha kukhona okungaphuthelwa: Ikhekhe leSimnel, ikhekhe lezithelo elimnandi elinongqimba lwe-almond paste ngaphezulu.
Kokubili iSpain nePortugal, uSuku Lomama lwalujwayele ukugujwa ngoDisemba 8 ngesikhathi se-Immaculate Conception kodwa ekugcineni lwahlukaniswa nemikhosi emibili yahlukaniswa.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Usuku Lomama eRussia